Maitiro ekutsiva mapombi ekicheni? -Kitchen Faucets, Pot filler, Bathroom Faucets
musha / Blog / Maitiro ekutsiva mapombi ekicheni?
2020 / 11 / 09 kupatsanuraBlog 419 0
Kunyangwe kutsiva kana kuisa pombi yemukicheni, iwe unofanirwa kupfuura nemabatiro akafanana. Kunyangwe kuisa pombi yekicheni zviri nyore neimwe nzira pane kuitsiva. Asi, kutsiva iyo tepi yekicheni zvakare haina kuoma kana iwe uchiziva hunyanzvi.
Kuti uve nechitarisiko chemazuva ano, iwe unofanirwa kuchinjanisa yako kicheni zvishongedzo zvinoenderana nemaitiro. Ndo zvinoita vanhu mazuvano. Iyo tepi yekicheni zvakare inogara ichikwidziridzwa uye inogara kwenguva refu yakakosha kicheni chishongedzo. Kunyanya iyo yakaderedzwa musanganiswa pombi iyo inogara kweanoda kusvika makore mashanu kusvika kumakumi mashanu.
Zvino, sei kutsiva yako tepi neye nyowani matte nhema dhonza pasi kicheni pombi? Muchikamu chino, takaita gwara rakakodzera rekutsiva yako yekare kicheni pombi. Ngatitangei!
Maitiro ekutsiva pombi yekicheni ine sprayer
Kutsiva pombi chinhu chakakosha kugadzirisa imba. Zvakajairika asi zvakaomera vazhinji vevashandisi vekicheni, kunyanya kune vasina ruzivo. Icho chokwadi ndechekuti, kutsiva matte nhema kudhonza pasi kicheni pombi hakuna kuoma sezvazvinoratidzika.
Ngatikuendesei kunhanho yekutsiva pombi yemukicheni ne sprayer.
Nhanho 1: Gadzirira
Pombi mbiri kana nhatu-gomba harishande pane rimwe gomba. Asi, pombi imwechete ine gomba inoshanda zvakaringana padhishi rine maburi maviri. Usati wagadzwa, enda kune pasi pesingi rako uye utarise kuti pane maburi mangani. Uya nehombodo yekicheni zvichibva paburi rekushambidza kwako.
Nhanho 2: Dzima mvura
Unofanirwa kunge wakasarudza pombi yauri kuisa? Iye zvino, bvisa mvura pane mavhavha pasi pesingi. Kana pasina mavharuvhu aripo, unofanirwa kuvhara mvura yese yeimba.
Nhanho 3: Disengage mitsara yemvura.
Dzinga mitsara yemvura kubva pombi uchishandisa chipanera chinogadziriswa. Ichakununura kubva kumanetsi emvura uchitsiva pombi. Paunenge uchiregedza mitsara yekupa, dzikamisa pombi yesingi iri pasi pekabati.
Ichi chiito chinobvisa kukanganiswa kwese munzira yemutsetse wemvura. Nekudaro, mvura inogona kufamba nyore nyore mumutsetse wekupa.
Nhanho yechina: Sunungura nzungu dzedhishi kuti ubvise pombi
Yenguva yekubvisa pombi yako yekare. Saka, sunungura nzungu dzekicheni yako kunyura pasi pekabhineti nechipanera. Zvino, zvishoma nezvishoma simudza pombi yako yekare kubva pakubatana kwesingi. Wobva wachenesa junk uye tsvina kubva pamusoro pebheseni rako.
Nhanho 5: Unganidza zvidimbu zvepombi
Unganidza zvidimbu zvefaucet nechinongedzo chekicheni singi. Tevedza rairo dziri pahomwe. Kunyangwe iri pombi yemubato mumwe-kana mabhegi-maviri-ekubata, iwo mirairo pamusoro pehombodo ichakuratidza nzira kwayo yekuisa.
Nhanho yechitanhatu: Isa iyo tepi mugomba regomba
Mushure mekubatanidza zvidimbu zvepombi pamwe nezvibatanidza, simbisa kubatana newrench inogadziriswa. Mushure meizvozvo, isa pombi mukati megomba rekunyura nenzira kwayo.
Wedzera chipfapfaidzo pamuromo wefaipi yekicheni. Sunga pfapfaidzo nepombi uye pombi ine poindi yekuisa.
Nhanho 7: Dzorera zvakare tambo yemvura.
Pakupedzisira, iwe waisa pombi yekicheni musinki yako. Zvino, yave nguva yekubatanidzazve tambo yemvura. Unganidza tambo yemvura pamwe neworiki inogadziriswa uye batidza mvura.
Nhanho 8: Tarisa kubvuza uye kumanikidza kwemvura
Iwe unofanirwa kumhanyisa pombi ipapo mushure mekumisikidza uye tarisa kana paine chero kuvhuvhuta. Sungisa sikuruu yekubatanidza poindi kana paine kubuda kana kukanganisika kupi mukupa kwemvura.
Rangarira, kutarisa pombi mushure mekumisikidza isarudzo asi rakakosha basa rekuita.
Nhanho 9: Chenesa singi
Mushure mekutsiva iyo tepi, iwe unowana marara musingi. Chenesa singi usati washandisa pombi.
Izvo zvakanyanyisa kuoma kutsiva pombi mukicheni yako singi? Aihwa? Saka, chii chauri kumirira? Ingo tevera mirau yedu uye kutsiva iyo pombi yekare yekicheni yako pasina rubatsiro.
Iyo sum kumusoro!
Kunyangwe iwe uchibika kana kuwacha zvinhu zvekicheni, iwe unofanirwa kuve uine ine simba kicheni pombi. Pombi ine simba yekicheni ndiyo tepu inopa kuyerera kukuru kwemvura. Pombi yekare mukicheni haigone kupa mvura yaunoda.
Ndicho chikonzero nei zvakakosha kutsiva pombi yako yekare yekicheni neidzo nyowani. Kuti tiwane pombi yemhando yepamusoro yekicheni, tinokurudzira kusarudza iyo yakaderedzwa musanganiswa pombi. Sei? Izvo nekuti, ndeimwe yemapombi ane simba ekicheni anouya neyakareruka kuisa maitiro. Ndinovimba, nhungamiro dzedu dzinokutungamira iwe kutsiva yako yekare faucet pasina chero kukanganisa.
Tsiva yako yekare yekicheni pombi uye unofara kubika.
Pakapfuura :: Nei Yakakodzera Kicheni Faucet Inoita Musiyano